किन महिलाहरू ४० वर्ष कटेपछि पर-पुरूषसँग ‘लालयित’ हुन्छन् ? – Kavrepati
Home / रोचक / किन महिलाहरू ४० वर्ष कटेपछि पर-पुरूषसँग ‘लालयित’ हुन्छन् ?
admin August 4, 2021	रोचक Leaveacomment 381 Views
एजेन्सी – विवाहपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै सबैको जोड हुन्छ । वैवाहिक स-म्बन्ध यस्तो स-म्बन्ध हो हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।
आधुनिक समाजमा विवाहको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । विवाहे-त्तर स-म्बन्धले धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरुमा समस्याहरू देखिदै छन् । वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान–श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता समस्याले कतिपयको स-म्बन्ध नै सकिएको छ ।
पुरुषवादी समाजमा विवाह-वेत्तर सम्बन्ध बनाउन पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाह-वेत्तर स-म्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहेत्तर स-म्बन्धमा रहन्छन् ।
अध्ययनले बताएअनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका यस्ता छन् कारण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बङ्गलादेशको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्मशताब्दी विशेष समारोहका अवसरमा त्यहाँका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहान ८ः४० बजे राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट बङ्गलादेश प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बिदाइ गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकुडीले सम्मानगारत अर्पण गरेको थियो ।
भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी छोरी उषाकिरण भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीकाप्रसाद ढकाल, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती, राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव डा हरि पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका प्रमुख डा भेषराज अधिकारी हुनुहुन्छ ।
Previous ६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Next ‘स’म्भोग अघि म’हिलाको ९ रु’चिहरु, जुन हरेक पु’रुषले जा’न्नै पर्ने हु’न्छ’ ।